Fihetsiketsehana sy fanesorana anaty rano mangatsiaka
Hobbies & Activities Rano fisotro madio
Mampiaka-peo, ny fisafidianana ny lokoka sy ny lokony dia tena ilaina
Ny ririnina any am-piandohana sy ny lohataona dia matetika mahavaky ireo farihy ary tena misy fiantraikany amin'ny trondro, indrindra fa ny basikety sy ny fikolokoloana. Na dia mijanona mazava aza ny farihy any avaratra dia mety ho lasa fitsipika mandritra ny vanim-potoana amin'ny lohataona ny rano fisotro rano, noho izany dia mila manamboatra izany ianao.
Ny zavatra tsara indrindra atao amin'ny farihy lava feno fotaka dia ny mikaroka izay toerana tsara indrindra amin'ny rano. Matetika ny rivo-doza eo akaikin'ny tohodrano dia kely kokoa noho ny toerana hafa.
Misy farihy lehibe iray izay matetika no manana rano madio akaikin'ny tohodrano. Mivezivezy ary mahita ny rano madio indrindra azonao.
Raha misy fotaka manerana ny tany ny rano, dia misy safidy sasantsasany. Ny trondro dia tokony hihinana, na dia ao anatin'ireo fepetra ireo aza, ary afaka mahita sakafo. Raha ny marina, ny bas iray dia mahita kankana plastika mainty amin'ny alina maizina ary ny crappie dia hihinana tantely amin'ny alina, noho izany ireo karazana ireo dia tsy voatery mahita ny babony mandritra ny fotoana rehetra. Rehefa moka ihany anefa ny rano, dia mihetsika izy ireo rehefa mihazakazaka akaiky kokoa, ary tsy manenjika ny sakafo.
Raha misy farihy iray na renirano iray mavesatra dia afaka manatsara ny fepetrao ianao amin'ny fampiasana kozatra izay mahatonga ny tabataba . Ny kitapoka izay mitabataba (noho ny BBs ao anatiny) dia manome ny trondro iray henoina amin'ny zero. Ny crankbaits mipetaka sy miparitaka dia natsangana manokana mba hampisy tabataba. Omeo fahafahana tsara kokoa ny trondro hikaroka ny trondro amin'ny alàlan'ny fanararaotra izany tsikelikely sy tsy miovaova. Na dia betsaka aza ny ankamaroan'ny trondro dia maka kitapo miaraka amin'ny stop-and-go retrieve mba hanahafana ny sakafo mora, ao anaty ranom-boasary dia tsara ny mandrehitra izany tsy tapaka izany mba ahafahan'ny trondro manaraka azy.
Tena tsara ny fifandonana eo am-pamakivakiana ireo atody. Ny sasany dia misy sangisangy, saingy azonao atao koa ny maka azy ireo manokana mba hampidirana azy amin'ny tranokala fidiovana na hampiditra ao anaty vatana plastika. Ny safidy hafa amin'ny rotsak'orana dia ny famokarana kofehy eo amin'ny mpametram-bozaka ary ny plastika plastika mikitroka any Texas, na eo anelanelan'ny mpametram-bozaka sy ny fihodinam-bolo amin'ny karandoha Carolina.
Ny kavina dia hahatonga feon-tsindrim-peo rehefa hampihorohoro ny tendron-tsoroka. Rehefa mikarakara ireo fanatobiana ireo, dia asio tsikelikely araka izay tratra izy ireo, ary ahintsano ny tendron-tsoroka mba hampitsaharana azy ireo.
Ny spinnerbait koa dia safidy tsara ho an'ny rano midy. Ny lelam-pandrosoana dia mandefa vibration izay azon'ny baomba atao. Ny sasany koa dia manana tadin-dokanga amin'ny vatany, na azony ampiana. Amin'ny rano mangatsiaka, misafidiana spinnerbait miaraka amin'ny iray na roa Colorado oriana Indiana fa tsy amin'ny voankazo goatleaf noho ny vibration bebe kokoa. Ny sasany amin'ireo spinnerbaits dia manana lamosina miloko miboridana izay mikendry hampisy tabataba kokoa. Avereno indray ny spinnerbait mba hanolotra tanjona mora kokoa.
Ny loko lure dia afaka mampiavaka ny fanjonoana rano. Raha ampiasain'ny crappie amin'ny ankapobeny ny ankapobeny ary tsy manana tadidy, dia afaka misafidy loko iray ahafahan'ireo trondro ireo mora kokoa. Amin'ny zava-niainako, mainty, chartreuse, ary mena dia mipoitra tsara amin'ny rano maloto, ary koa ny fitambaran'ireo loko ireo dia toa tsara ihany koa. Ny iray amin'ireo mpihinana crappie tsara indrindra amin'ny rano midy dia manana loha mena, vatana mainty, ary chartreuse tail.
Ho an'ny bas amin'ny rano midy, tsindrio ny spinnerbaits or crankbaits. Ampiasao ny kiraro mainty sy kisoa misy kofehy sasantsasany amin'ny skirt. Ny manga mirehitra dia miasa ao anaty fotaka ihany koa ary ny olona sasany dia mianiana amin'ny serfa mainty sy manga miaraka amin'ny safira manga vita amin'ny safira amin'ny rano midy.
Tadidio fa mety hisy fiantraikany eo amin'ny mpangalatra mihoatra noho ny trondro ilay rano mangidy. Amboary ny toe-tsainao ary tsapao fa ny trondro dia afaka mahita sakafo ao anatin'io fepetra io. Tokony ho afaka hitazona azy ireo ianao amin'ny fisafidianana ny fisokajiana tsara, ary manjono sy mihazakazaka ny fanjonoana.
Ity lahatsoratra ity dia novolavolaina sy naverin'ny mpahay fitahirizana Freshwater Fishing, Ken Schultz.
Momba ny habeny sy ny taonan'ny bas ao Géorgie
Fomba hanapahana "vetivety" trondro ho an'ny Bassin Largemouth
Elite Bass Angler nanjavona tao Guntersville
Fipoahana toro-hevitra momba ny mpanjono Bass sy Strategies
Top 10 Fishing Fishing on Lake Guntersville
Fomba hanapahana sigara sy sigara
Baolina kitra Bass ao Georgia
Mampiasa baikon'ny Bait mba hanangonana Walleye ao amin'ny Farihy Kabetogama
Fiompiana kely ho an'ny Walleye
Fitetezana Atsimo ho an'ny Bass, Crappie, ary Catfish amin'ny Septambra
Fanjonoana manalavitra ny Banky
Inona ny trondro mpanjono tsara indrindra?
Ahoana ny toetr'andro sy ny toetr'andro any amin'ny Northern Hemispheres any atsimo
Fomba tsy handraisana kilasy College
Ahoana no hamadihana azy?
Mendri-kaja ve ny mpino silamo?
Fihetseham-po sy dikany amin'ny zavakanto sy ny sary
Ahoana no hahazoanao tapakila maimaim-poana amin'ny fandaharana amin'ny alina na amin'ny alina
Famaritana sy ohatra amin'ny foto-kevitra ara-dalàna
Weekly Newsletter amin'ny fifandraisana Parenting
Mpandihy mandoline lehibe
Ahoana ny fomba ampiasana ny pronunciation personnel amin'ny alemana
Inona no atao hoe Ed.D. Degree?
Izay lazain'ny Baiboly momba ny fialan-tsiny
Sample MBA Essay ho an'ny Wharton
Shakespeare Quotes momba ny voina
Mpitarika ny Ray-Zanaka amin'ny PGA Tour
Top 10 New Album Christmas Pop 2013
Cómo y está estado en Estados Unidos
Ny pesta sixty
Vavaka famaranana: 'Hitahy anao anie i Jehovah ary hanambina anao'
Izay marina: Raha izaho no izy sa izaho?